Wararkii ugu dambeeyey ee doorashada Madaxweynaha Koofurgalbeed Soomaliya | Jowhar Somali News Leader
Home WARARKA Wararkii ugu dambeeyey ee doorashada Madaxweynaha Koofurgalbeed Soomaliya
Wararkii ugu dambeeyey ee doorashada Madaxweynaha Koofurgalbeed Soomaliya
Qaar ka mida musharixiinta u taagan u tartamaysa doorashada Madaxweynaha Maamulka Koonfur Galbeed ee Soomaaliya ayaa qoraal ay soo saareen waxa ay ugaga hadleen qoddobo badan oo xasaasi ah iyagoo dhaliilay dib u dhigista doorashada ee markii saddexad dib loo dhigey.
Qoraalkan oo ay ku saxiixnaayeen musharaxiinta kala ah Mukhtaar Roobow Cali, Aadan Maxamed Nuur (Saransoor) iyo Ibraahim Macalin Nuur ayaa lagu sheegay inaan laga talogelin dib u dhigista doorashada, waxayna intaas ku dareen iney ka walaacsan yihiin madax bannaanida Guddiga Doorashada oo faragelin kala kulmaya madaxda KMG ah ee Koonfur Galbeed.
Musharaxiintan ayaa sheegay in dib u dhigista doorashada ee lagu beegay 19ka December oo ah xilli inta badan shaqaalaha reer galbeedka ah ay fasax yihiin loogu talogalay in aysan ka qeybgalin doorashada kormeerayaal caalami ah.
Sidoo kale musharaxiintan ayaa qoraalkooda waxa ay ku codsadeen in la dhiso guddi madaxbanaan kaasoo ka hortaga musuqmaasuqa doorashada. Qoraalkan ayaa si rasmi ah waxa ay musharaxiinta ugu dalbadeen in dib loo celiyo ciidamada dowladda Soomaaliya geysay magaalada Baydhaba, iyadoo xilliga la qabanayo doorashada ay dhici karto in dowladda federaalka ay si musuq ah doorashada ugu shubto musharaxa ay wadato.
Halkan hoose ka aqriso qoraalka ay soo saareen saddexda musharax;
Previous articleHay’ada Socdaalka iyo Jinsiyadda oo shaacisay xilliga dib loo bilaabayo bixinta Baasaboorka
Next articleCNN;”Farriimo uu ku direy WhatsApp Khashoggi ayaa cadeyn u noqon karta dilkiisa”